Tuugo Jalaabiib soo xiratay oo Dhac la yaab leh u geeysatay mid ka mid ah Dukaanada Yurub (Daawo Muuqaal+Warbixin) ! - iftineducation.com
iftineducation.com – Magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska waxaa ka dhacay Dhac la yaab ah oo nuuciisa aan horay loogu arag magaaladaas ka dib markii koox Burcad ah oo soo xiratay Dharka loo yaqaan Jalbaabka ay Boob aan caadi aheeyn u geesteen mid ka mid ah Dukaamada ugu caansan magaalada Manchester ee lagu iibiyo Dahabka.
Tuugadaan oo ahaa kuwo Naxariista ka guurtay waxeey Dukaanka markii ay soo galeen Dadkii ku jiray ku fureen Qiiq si aan loo aqoonsan Wajigooda balse waxaa taas ka sii darneed markii ay xaabsadeen Dahabkii banaanka yaalay dabadeed waxeey si Xaasidnimo ah Burus ula dhaceen Qaanadihii dhalada ka sameeysnaa oo uu ka buuxay Dahabka loo yaqaan Keeydka.
Burcadaan ayaa ka koobneed 5 Qof waxaana Dukaanka Dahabka gudaha u soo galay 4 ka mid ah Burcada halka kan Shanaad uu diyaar ugu ahaa Gaari ay wateen oo yaalay Banaanka.Tuugadaan oo watay Faasas iyo Burus waxeey aad u jajabiyeen Qaanadihii Muraayada ka sameeysnaa kuwaas oo inta badan gurtay Dahabkii Qaaligaa ahaa ee halkaa ka buuxay .
Arinta ugu yaabka badan waxeey tahay Burcadaan markii hore oo ay Gaariga ka soo dagayeen waxeey dhamaantood soo xirteen Xijaabka loo yaqaan Jalbaabka kuwaas oo iska dhigayay Dumar ka adeeganaya Dukaanka Dahabka. Ciidamada Booliiska magaalada Manchester waxeey gacanta ku dhigeen Sigaar lagu sheegay Haash oo ay cabayeen Burcada Tukaanka dhacday kaas oo la sheegay inuu ka dhacay Gaarigii ay wateen waxaana iminka ku socda Baaritaan balaaran.
Sidoo kale Ciidamada Booliiska magaalada Manchester ayaa Su´aalo weey diinaya Haweeneey looga shakiyay inay Burcadaan Basaas u aheeyd taas oo uga soo horeeysay Dukaanka Dahabka lagu iibiyo waxeeyna imaan jirtay halkaas dhoor maalmood ka hor inta aysan Tuugadaan dhicin Dukaanka Dahabka lagu iibiyo ee magaalada Manchester.